Cayaaraha: Kiprop Kiyuucda ayaa hakisay sannadihii 4 ee doping - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS »Ciyaaraha: Kiprot Keny ayaa hakiyay sannadihii 4 ee doping
The Asbel Kiprop Kenya, kooxda heysata horyaalka Olympic m 1500 2008 iyo horyaalka adduunka xaafuun, waxaa ganaax afar sano ah ay qorayeen, ayaa sheegay Fudud Integrity Unit (IAU) ah, hay'ad madax-banaan ka masuul ah arrimaha kalsoonida iyo doping ee anshaxa.
The sano 29 Orodyahanka Kenya horay u ahaa hoos ganaax ku meelgaarka ah tan iyo 2018 February sababtoo ah laga heley erythropoietin (Epo), oo la aasaasay November 27 2017, oo waxay isagii u kasbaday ganaax afar sano.
Maxkamada Anshaxa ee Xiriirka Caalamiga ah ee Ciyaaraha Caalamiga ah (IAAF) ayaa beenisay eedeymaha aan loo meel dayin ee Kiprop ee difaacay.
In ay talada haya, arkay by AFP, in uu aaminsan yahay in si gaar ah in "hypoxia keeno sare iyo tababarka jirka u daran ma sharxi karaan joogitaanka exogenous Epo tijaabada," khadadka difaaca a ee cayaaraha.
Weli wuxuu u dacwoon karaa Maxkamada Xalinta Khilaafaadka (CAS). Isugeyntii afartan sanno waxay ka socotaa taariikhda ka-hakin ku-meel-gaar ah, 3 Febraayo 2018, ie illaa bilawgii sanadka 2022.
imtixaanka fiican Epo Kiprop ahaa dhabar jab kale oo ay adag tahay in ay ciyaaraha fudud ee Kenya. Wuxuu ahaa sayid dhexe-fog ee sannadihii la soo dhaafay iyada oo saddex koob oo ah horyaalka adduunka 1500 m (2011, 2013, 2015) iyo fatxi Olympic ka badan masaafo la mid ah 2008 ee Beijing soo socda kala furfurista ah Rashid Ramzi ay qorayeen.
Guud ahaan, 138 ciyaartooy Kenyan ah ayaa lagu tijaabiyay ololaha ladagaallanka doping tan iyo markii 2004, badi kiisaska laga helay baaritaanno tartan ah.
Kenya ayaa lagu soo wareejiyay 2016 liiska wadamada ay ka mid yihiin ilaalinta IAAF. Waxayna ahayd kaliya markii la ansaxiyay sharci cusub oo dawada doping ka hor ciyaaraha Rio Rio ee 2016 in dalka laga saaray liiska "WADA-adkaanta" ee WADA.
Qormo Isha: https://www.france24.com/en/20190420-athletism-the-kenyan-kiprop-suspendu-4-ans-doping
Sidee Traoré shaqo uga heshay FC Nantes
Nasser Njoya: "Koq sportif waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka fiican doorashada libaaxyada aan la dabooli karin